Spirit Airlines dia mitondra zotra iraisam-pirenena vaovao mankany amin'ny seranam-piaramanidina Intercontinental any Houston
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Spirit Airlines dia mitondra zotra iraisam-pirenena vaovao mankany amin'ny seranam-piaramanidina Intercontinental any Houston
Jona 26, 2018
Miandry ny hatsaran-tarehy sy kolontsaina maro karazana any Amerika Latina satria manohy ny fanitarana iraisam-pirenena ny Spirit Airlines, amin'ity taona ity avy any Houston! Manomboka amin'ny 6 septambra 2018 dia hanomboka serivisy i Spirit manomboka any amin'ny seranam-piaramanidina George Bush Intercontinental (IAH) mankany San Salvador, El Salvador miaraka amina serivisy mandritra ny taona intelo isan-kerinandro mankany Monseñor Óscar Arnulfo Romero International Airport (SAL). Ny ampitso, amin'ny 7 septambra, hanomboka sidina tsy miato eo anelanelan'ny Houston sy Guatemala City, Guatemala i Spirit miaraka amin'ny serivisy mandritra ny taona ary mihodina inefatra isan-kerinandro mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena La Aurora (GUA). Ireo fanampiana dia manolotra saran-dàlana mora vidy ho an'ny dia iraisam-pirenena hahita namana, fianakaviana, na fialamboly fotsiny!
Ireo zotra vaovao dia hameno ny serivisy iraisam-pirenen'i Spirit misy eo anelanelan'i Houston sy Cancun sy San Jose del Cabo, Mexico, ary San Pedro Sula, Honduras. Ireo làlana dia natao hanamafisana ny tamba-jotra mitombo ao amin'ny Spirit ary manararaotra ny filan'ny fivezivezena isan-karazany any Houston. Ny fanambarana dia herinandro vitsivitsy monja taorian'ny nanambaran'ny Spirit fa nandefa làlana tokony ho am-polony avy any Orlando, Florida ka hatrany Amerika Latina sy Karaiba.
"Ny fanampiana an'i San Salvador sy Guatemala City amin'ny lisitry ny tanjonay any Houston dia hanome safidy ho an'ny Vahininay hitsidika olona tiana sy hiaina izay rehetra atolotry ny faritra mahatalanjona ireo," hoy i Mark Kopczak, filoha lefitra misahana ny fandrindrana ny tambajotra Spirit Airlines. "Manohy manaporofo ny tenany ho mpitarika amin'ny fitsangatsanganana any Amerika Latina sy Karaiba i Spirit amin'ny alàlan'ny fanolorana saran-dàlana ambany indrindra izay ahafahan'ny maro manararaotra ny serivisinay azo antoka."
Houston Bush (IAH) mankany / manomboka: Matetika:
San Salvador, El Salvador (SAL) * 6 septambra 3x isan-kerinandro, mandavantaona
Tanànan'i Guatemala, Goatemalà (GUA) * 7 septambra 3x isan-kerinandro, manodidina ny taona
4x isan-kerinandro, mandavantaona aorian'ny 11/8/18
San Jose del Cabo, Mexico (SJD) Serivisy efa misy 4x isan-kerinandro, ara-potoana
Cancun, Mexico (CUN) Serivisy efa misy 3x isan-kerinandro, mandavantaona
Isan'andro amin'ny fahavaratra
San Pedro Sula, Honduras (SAP) Serivisy efa misy 4x isan-kerinandro, mandavantaona
Kintana United Polaris mamiratra mamirapiratra any Texas
Boeing 777 sy Airbus A330 nifandona tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Gimpo any Seoul